RANJEVA Raymond : Manahy ny fisian’ny mpikarama an’ady – MyDago.com aime Madagascar
Nitondra ny heviny momba ny fijoroan’ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (CES) ny Pr Ranjeva Raymond. Nambarany fa ny fitsarana amin’ny maha fitsarana azy, manana fahefana sy adidy hanamarina na mitombina araka ny lalàna na tsia ny fanapahan-kevitra. “Tsy mifantoka afa-tsy amin’ny lalàna ihany izany ny fanapahan-kevitra raisin’izy ireo. Na mihevitra ny hifantoka amin’ny lalàna aza anefa ny CES vaovao, tsy hijanona fotsiny amin’ny fampiharana izany izy ireo fa tsy maintsy hieritreritra ny zava-misy araka ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao sy ny fanirin’ny mpitondra, indrindra fa ny momba ny fifidianana no hotsarainy. Ahiana tsy hampisy hasina intsony ny didim-pitsarana ary haha very hasina tanteraka ny mpitsara atsy ho atsy izany satria maro loatra ireo mpahay lalàna mpikarama an’ady, mihevitra fa entina hikarakara tombontsoa manokana fa tsy ho an’ny firenena ny lalàna…”, hoy ny P Ranjeva Raymond, ny faran’ny herinandro teo tao amin’ny onjam-peo tsy miankina iray.
Fitsinjovana tombontsoa politika manokana
Ankoatra izany, nohitsiany fa tsy mampijoro intsony amin’ny maha fitsarana azy ny lalàna nananganana ny CES vaovao, fa nampijoro vaomiera ara-panjakana hikarakara fifidianana. “Samihafa mihitsy ny dikan’izany eo amin’ny lalàna momba ny fitondrana ny raharaham-bahoaka sy ny raharaham-panjakana ho anay. Vaomieran’ny raharaham-panjakana ny CES vaovao nefa fitsarana mahatapaka izy teo aloha. Fitsinjovana tombontsoa politika manokana ny nananganana azy io fa tsy ny tombontsoan’ny firenena”, hoy ihany ity mpahay lalàna eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ity.
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 août 2013 14 août 2013 Catégories Politique
5 pensées sur “RANJEVA Raymond : Manahy ny fisian’ny mpikarama an’ady”
15 août 2013 à 14 h 33 min
Sao dia mila SOLAITRA BE ianao hanazavanao izany rehetra izany Andriamatoa @’ireto FOZA
fa tena mandreraka be @ FIN ilay TSY FAHALALANA sa FANOSIHOSENA fotsiny izao zoan’ny
MPITSARA, fa ny mampi-pirina izay voa koa anie na » voadaka » dia niara-petsapetsa tao ,koa tsy afa-mikofoka na
dia hita aza fa TSY METY ARY TSY RARINY ny NANOLOANA ireo CES teo aloha e!!
Efa natsipy any an-jorom-bala ilay FAHAIZANA fa ny KITAPO LATSAKA NO TATAZANA sy F IKIRINA mafy sao maty
antoka e!impiry hisy ohatra izao indray????mbola tsy lany ny « bois de rose » ny vatosoa sy volamena ny omby ny zaza
amam-behivavy sns HILIBANA eeeee
15 août 2013 à 16 h 09 min
Totondry ataovy ambony:
15 août 2013 à 17 h 20 min
FANAMBARANA GTT Iraisampirenena-Genève: « Halohalika ny ranom-bary: Angatahanay ny fialàn’ny mpitarika ny ankolafy Ravalomanana »
Envoyé par: picpus (Adresse IP journalisée)
Date: mer. 14 août 2013 21:12:00
Ny GTT inter Ge dia tsy mahay afa-tsy ny mitsikera ary efa an-taona maro izay miaraka am GTT hafa ireo no milaza foana hoe mpamadika i Lita, mpamadika i Bozy fa mbola eo ihany anefa i Lita sy Bozy satria mbola atokisan’ny Filoha Ravalomanana. Hoy aho hoe: Fanambaran’ny Malagasy tsy miray saina amin’ireo GTT ireo :
– Mangataka ny filoha RAVALOMANANA mba handray andraikitra entitra mikasika ireto mpomba mafiloha tsy manaraka torimarika fa manao izay dan’ny kibony fotsiny.
– mba hitey mafy ireto tena mpandrava tolona, satria ny fanambarana toy izao dia mampiseho ny fampizarazarana ka manimba ny tolom-bahoaka nanomboka tamin’ny taona 2009, eny fa ny tolona nataonay ny 2002 aza izany;
– mba hiteny mazava ny tena heviny mikasika ny raharaham-pirenena ary hametraka torimarika mazava hoharahina fa manaraka izahay vahoaka.
– mba tsy hanaiky intsony ny hevitra atolotr’ireo mpanolo-tsaina vilana satria manimba ny asa natao izany.
Mangataka kosa ireo mpiandraikitra ny movansy:
– mba haneho fahamatorana amin’ny fandraisana fepetra isan-karazany
– mba handray andraikitra amin’ny fampivondronana ny olonn’ny filoha Ravalomanana rehetra fa tsy ho variana amin’ny raharaha eo an-toerana ihany, miparitaka ny ondry manerana an’i Madagasikara anefa isika dia variana amin’ny adalan’ny HAT eo an-drenivohitra.
Ataoko fa efa vita ny ady matanjaka amin’ny HAT satria efa fasika rahateo izy ireo fa ny ady lehibe mila hatrehina dia ny fampandaniana an-dRtoa LALAO RAVALOMANANA izao no atao .
16 août 2013 à 2 h 52 min
Isika foana no marary fo fa hadinonareo ve ilay tenin’i Razanakisoa nanao hoe : « IZAHAY DIA AMBONIN’NY LALANA » koa inona no hahagaga ny zavatra ataon’ny foza efa h@ 2009 nakaty
17 août 2013 à 10 h 28 min
L’ injustice où qu’elle soit est une menace pour la justice partout.( Martin Luther King).
L’ illégalité pour un temps est une promesse pour la légalité à tout moment.(Ramalagasy)
Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l’équité.(Confucius).
Les premières richesses des gouvernés doivent être la légalité et la liberté.(Ramalagasy
Précédent Article précédent : FFKM : Nampivory ireo solontena telo avy amin’ny movansy efatra
Suivant Article suivant : KOLIKOLY AVO LENTA AO AMIN’NY CES : MISY MANAMBY MILIARA HANALANA KANDIDA IRAY